Wakhtiga La Filayo In Ay Liverpool Ku Dhawaaqdo Saxiixa Naby Keita Oo la Ogaaday, Miyuu Ka Qayb Qaadan Karaa Kulanka City – Kooxda.com
Home 2018 January Ingiriiska, Wararka Maanta Wakhtiga La Filayo In Ay Liverpool Ku Dhawaaqdo Saxiixa Naby Keita Oo la Ogaaday, Miyuu Ka Qayb Qaadan Karaa Kulanka City
Wakhtiga La Filayo In Ay Liverpool Ku Dhawaaqdo Saxiixa Naby Keita Oo la Ogaaday, Miyuu Ka Qayb Qaadan Karaa Kulanka City
Naby Keita ayaa lagu soo waramayaa in uu ku dhaw yahay in si Rasmi ah loogu soo bandhigo in uu xiddig Liverpool ah yahay in kasta oo tababaraha kooxda RB Leipzing ee Ralph Hasenhuttl uu beeniyay arintaas.
Kooxda Liverpool iyo dhigeeda reer Germany ayaa xiddigan horay uga heshiisyay saxiixiisa waxana la filayay in uu xiddigan xagaaga dambe ku soo biiro kooxda Liverpool.
Laakiin Kadib markii uu Philippe Coutinho 142 milyan oo euro ugu biiray kooxda Barcelona ayuu Jurgen Klopp doonayaa in uu xiddigan ku buuxiyo booskiisa.
Keita ayaa sidoo kale doonaya in uu Liverpool ku soo biiro kadib markii kooxda Leipzing laga reebay champions league inkasta oo uuna Lviverpool u ciyaari doonin hadii uu yimaado tartanka champions league.
Faah-faahinta heshiiskii hore ee xagaagii ay labada kooxood gaareen ayaa la sheegayaa in ay ku jiro heshiis 66 milyan ku kacay laakiin ma cada inta ay haatan Liverpool diyaarka u tahay in ay bixiso.
Xiddiga ayaa la filayaa in xiddig Liverpool ah loo soo bandhigo subaxnimada maalinta Axada laakiin xiddiga ayaan ka qayb qaadan doonin kulanka ay Liverpool la ciyaari doonto kooxda Man City maalinta Bari ah.